Kulankii ay maanta u ballansanaayeen hoggaamiyayaasha Saddexda xisbi oo Baaqday | Somaliland.Org
Kulankii ay maanta u ballansanaayeen hoggaamiyayaasha Saddexda xisbi oo Baaqday
May 27, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Kulan kale oo ay maanta oo Salaasa ah u ballansanaayeen hoggaamiyayaasha saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland ayaa baaqday.
Wax war ah oo rasmi ah lagama bixin sababta uu u baaqday kulankaasi. Hase yeeshee, ilo ku dhowdhow hoggaamiyayaasha saddexda xisbi ayaa sheegay in dhinacyada wadahadaladu u dhexeeyeen ay isla qaateen in dib loo dhigo kulankaas ilaa 1da bisha June oo ku beegan Axadda soo socota.
Wararkaasi waxay tibaaxayaan in kulankan dib loo dhigay sabab la xidhiidha dhammaystirka qodobadii hore ee lagu heshiiyey oo laga sugayey, mudane Daahir Riyaale dhammaystirkooda, kuwaas oo la xidhiidha in dammaanad-qaad sharci in loo sameeyo in Guurtidu aanay faragelin, isla markaana ixtiraamto wakhtiga Komishanka iyo Saddexda xisbi ku heshiiyaan in la qabto doorashada iyo in wax-ka-beddel lagu sameeyo xeerka Diiwaangelinta codbixiyayaasha oo caqabad ku ah qabashada doorashooyinka, gaar ahaan qodob ka mid ah xeerkaas oo dhigaya in diiwaangelinta iyo doorashada ay u dhexaynayso Lix bilood.
Qodobadan oo la isku raacay kulankii u horreeyey ee ay isugu yimaaddeen madaxda saddexda xisbi, waxa loo ballamay in mudane Riyaale soo dhammaystiro fulinta qodobadaas muddo maalmo ah, waxaana laga sugayey in qodobadaas oo ay xisbiyada mucaaridka ahi soo dhigeen miiska uu fulintooda keeno Daahir Riyaale fadhigii ugu dambeeyey ee Axaddii, 25 May, balse, uu mudane Riyaale ka cudurdaartay, isaga oo sheegay in shaqadu ku badnayd.
Wararku waxay sheegayaan in Daahir Riyaale aanu weli u gudbin Golaha Wakiillada kaabista iyo wax-ka-beddelka lagu heshiiyey ee xeerka Diiwaangelinta, iyada oo uu gebagebo yahay kalfadhigga aan caadiga ahayn ee Golaha Wakiilladu ku jiro, kalfadhiga Golaha Guurtiduna xidhan yahay. Waxaana la sheegay in mar kale mudane Riyaale wakhti u qaatay gudbinta xeerkaas iyo arrimaha kale ee jawaabtooda laga sugayo oo ay ka mid tahay nooca ay noqonayso xukuumadda dalka gaadhsiinaysa doorashadu.
Daahir Riyaale Kaahin ayaa muddadii xilka Madaxweynenimada Somaliland loo doortay ka dhammaatay 15kii May, waxayna xisbiyada mucaaridku diideen muddo sannad ah oo Guurtidu u kordhisey, taas oo lagu tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn. Hase yeeshee, maalin ka hor dhammaadka muddada xilka Madaxweynenimada Daahir Riyaale ayaa wadahadallo u bilaabmeen hoggaamiyayaasha labada xisbi ee mucaaridka ah iyo Madaxweynaha muddada xilkiisu dhammaatay, si xal looga gaadho khilaafka ku saabsan muddada xilka Madaxweynaha ee dhammaatay iyo qabashada doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waxaana ilaa iyo hadda lagu heshiiyey wakhtiyayn cusub oo Komishanka iyo guddi saddexda xisbi ahi isla soo qaateen, kaas oo cayimaya in labada Doorasho ee Deegaanka iyo Madaxtooyadu ay qabsoomaan 15 Dec. 2008 iyo 15 March 2009. Waxa kale oo la isku afgartay in wax-ka-beddel lagu sameeyo Xeerka Diiwaangelinta iyo in dammaanad qoraal ah iyo mid sharci loo sameeyo in wakhtiga doorashada ee lagu heshiiyey.
Kulankan maanta ayaa la filayey in lagaga wadahadlo nooca ay noqonayso dowladda dalka gaadhsiinaysa, taas oo la isla soo qaaday kulankii u dambeeyey in awoodda la qaybsado, isla markaana dib looga ballamay.
Dhinaca kale, siday u kala horraynayaan doorashooyinku oo ka mid ahaa mawduucyada laga wadahadlayey, balse, aan si buuxda looga heshiin ayaa isaguna ka mid ah arrimaha dib loogu noqonayo ee heshiis buuxa laga wadagaadhi doono kulanka 1da June.
Dad badan ayaa ka werwersan sida Daahir Riyaale u fulinayo waxa lagu heshiiyo.